Gịnị mere ike ji agwụ m mgbe niile? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ike gwụrụ oge niile - azịza dị irè
Ike gwụrụ oge niile - azịza dị irè
Gịnị mere ike ji agwụ m mgbe niile?
Ọ bụ ezie na enweghị ụra nwere ike iyi ka ọ bụ ihe doro anya na-akpata ike ọgwụgwụ na-adịghị ala ala, ọ bụ ihe ijuanya kpatarana-enwe ike ọgwụgwụ. Ọtụtụ ndị na-ebi ndụmmetụtana-enwe nrụgide ma ọ bụ na-arụsi ọrụ ike iji kwụsịlata ma hie ụra niile ha kwesịrị-enwe mmetụtaezi.
Ọ na-adị gị ka ike gwụrụ gị n’enweghị ume oge nile? Izere ihe isii a m ga - agwa gị nwere ike ịkwalite ume gị ma nwee ọ andụ dị ka onye nwegoro oge enyemaka na obodo ma na-arụ ọrụ nzuzu na nkezi 80 awa n'izu ma mụ onwe m kwa na-akpọ kwa abalị nke anọ ma ọ bụrụ ị mụ anya 24 awa ụra ụra na-agbagha agbagha M na-ekwu site na ahụmịhe mgbe m na-ekwu na ike gwụrụ m oge niile, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala, emeela m ya ma mee ya oge mgbe ọtụtụ Enwere obere ume ya mere enwere ihe isii ị nwere ike izere ime onwe gị ka ị nwee mmetụta nke a ma ndị a dabere na nchọpụta ahụike kachasị ọhụrụ na ihe akaebe dabere na ọgwụ. Yabụ na-enweghị oge, ka anyị bido site na otu ihe, ka anyị na-aka nka, anyị tufuru mitochondria, nke bụ igwe ọrụ na-emepụta ume na anyị, yabụ na anyị na-ewepụta obere adenosine triphosphate, ma ọ bụ ATP, ma ọ bụ ATP maka nkenke, nke bụ molekul ahụ. nke ahụ na-enye mkpụrụ ndụ ike n’ime ahụ niile Ihe ndị ọzọ na-akpata oke ibu na-enye mmetụta dịka nsonazụ sitere na ọgwụ ma ọ bụ ọrịa na-adịghị ala ala dịka ịda mba ma ọ bụ ọrịa obi COPD nwere ike ime ka ike gwụ gị ma ọ bụ ịdị umengwụ, mana afọ na ihe metụtara ọrịa abụghị naanị ihe kpatara igba ụra gị ume na mgbe m na-ekwu ụra ụra m na-ekwu na enweghị ezigbo ụra ụra. Ya mere, ọ baghị uru n ’ọ bụ ogologo ụra, ọlị ụra nke ọma n’onwe ya.
Enweghị ezigbo ụra na-eme ka ogo cortisol dị elu ma na-akwalite mbufụt. Iji hie ezigbo ụra abalị, ị ga-enwerịrị ezigbo ụra. Nke ahụ pụtara na ị lakpuo ụra ma teta n'otu oge kwa ụbọchị na-edebe ime ụlọ gị n'akụkụ oyi ma na-eme ka ọ nọrọ jụụ na enweghị elektrọnik nke na-akpali ụbụrụ gị acha anụnụ anụnụ site na ekwentị site na laptọọpụ si iPad, ihe ọ bụla Gị anya na-akpali akpali n'ihi na ụbụrụ gị abụghị bueno, yabụ ikwu okwu na ekwentị n'ihe ndina ọbụlagodi tupu ị lakpuo ụra ọ dịkarịa ala awa abụọ tupu ị lakpuo ụra n'ihi na nke a na-akpali gị ma ọ tinyela gị n'ọnọdụ adrenergic na ị ga-anọrịrị na ọnọdụ ọmịiko.
Obi Umeala, Obi Ume Ala Tupu timerakpu Ọ bụrụ na ị na-a cafụ kọfị, a don'tụla nnukwu mmanya, jide n'aka na ọ bụ n'isi ụtụtụ ma ghara ị drinkụ mmanya caffeine tupu ị lakpuo n'ime afọ asatọ, otu ihe ahụ bụ mmanya na-aba n'anya ma ọ bụrụ na mmanya nwere ike inyere gị aka daa n'ụra, ọ na-egbochi usoro ihi ụra ma belata ụra ụra. Ọzọkwa, mmanya na-eme ka uru ahụ dị n’ akpịrị gị belata mgbe ị na-ehi ụra, ọ bụ ya mere na ị ga-enwekarị ike ịnwe ụra mgbe ị na-a alcoholụ mmanya na-aba n’anya na ị na-enwekarị nsogbu ịrahụ ụra mgbe mmanya na-aba n’anya na sistemụ gị mgbe nsogbu ihi ụra na-akpata nsogbu ụra. nke na-eku ume ume mgbe ị na-ehi ụra na ndapụta n'ọbara ikuku oxygen na-agbada ogo ike ATP. Gwa dọkịta gị gbasara ohere i nwere ike ihi ụra n’oge.
Ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka ị mụrụ anya gụnyere nsonaazụ ọgwụ na nleta ụlọ mposi ugboro ugboro, yabụ nke a bụ ihe ọzọ mere ị ga-eji zere mmanya na caffeine dị nso n'oge ụra na mgbe ị na-eche na ị na-atụ ụfụ nke ukwuu ma ọ bụ na-eme mkpọtụ iku ume Jide n'aka na ị ga-ahụ dọkịta gị. Ihe izere nke abụọ na ndepụta nke na-eme ka ike gwụ gị bụ arụghị ọrụ. Fọdụ ndị mmadụ na-eche na mmega ahụ na-eme ka ike gwụ ha, nke ahụ bụ eziokwu, mana ọ bụ naanị nwa oge.
Na-eme ihe mgbe niile ma na-emega ahụ oge niile ike gị dị elu na - abawanye ihe kpatara nke a, ọ dịkarịa ala akụkụ nke ihe kpatara ya metụtara akwara gị, mgbe ị nwere obere akwara, nke a pụtara na ị nwere mitochondria pere mpe ma pere mpe ATP na - eduga n'ịdị ike. ma na-adalata exercgaghị enwe akwara na-eme ka ha jiri ike rụọ ọrụ nke ọma na-eme ka akwara na-enyere ha aka ịrụ ọrụ nke ọma ma na-echekwa ATP, na ịba ụba mmepụta ume nke kemịkal ụbụrụ, ọ bụ ezie na mmega ahụ niile dị mma dị ka iguzo na ije, mmega ahụ nke oge Ihe nke atọ nwere ike inu oke ike gi di oke nkpa na ndu gi Nsogbu na-adighi ike nwere ike ịbawanye ogo Cortisol Cortisol bụ homonụ nke gland adrenal mere ma mgbe ewepụtara ihe ọjọọ, ọ na-ebelata mmepụta nke ATP ọ na - eme ka mbufụt too dị mma, yabụ iji usoro mbelata nrụgide ga-ebelata ogo cortisol ka ị nwee ike ịme ihe dịka yoga mindfu lness tai chi iku ume mmega ahụ rue nkeji iri kwa ubochi na-enye aka. Ihe nke anọ zuru ike gị bụ nri na-edozi ahụ. Ọ bụrụ na ị naghị eri nri ahụike, o yikarịrị ka ị ga-enweta ezigbo vitamin na mineral iji mezuo ATP zuru oke, ị ga-ejedebe na ike gwụrụ gị, rie ọtụtụ nri esichara nwere ike ime ka mbufụt, nke na-ebute mmepụta nke ATP na nri ndị agụụ na-agụ bụ ndị nwere nkwarụ ma gbakwunye shuga dịkwa njọ n'ihi na ọ na-eme ka spikes na-ebu shuga na ihe ọghọm ị ga - enweta ma emesịa, ọ na - ebute ike ọgwụgwụ na - adịghị ala ala n'ozuzu ya.
Yabụ, iri ezigbo nri pụtara iri nri niile gụnyere akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi, ọka niile, protein na-edozi ahụ dị ka azụ, ọkụkọ, akụ, mkpụrụ, acid fatty na protein Nye anụ ahụ gị nri na-adịgide adịgide na obere shuga shuga. Ọ dị mma, ihe nke ise na ndepụta nke nwere ike ịmịkọrọ ume gị bụ Nhọrọ Fluid Pore Fluid nhọrọ nwere ike ime ka ike gwụ gị. Na oke shuga shuga na-eduga na akpịrị ịkpọ nkụ N'ihi nke a, ndị ọrịa na-arịa ọrịa shuga na-arịkarị elu akpịrị ịkpọ nkụ na mba dị ụba nke na-egosi otu anyị si eme nyocha ahụ.
Nke a na - eme n'ihi oke ọbara shuga dị na akụrụ akụrụ akụrụ enweghị ike ịchekwa shuga niile ọ na-awaba n'ime mmamịrị, yabụ shuga dị njọ n'ozuzu, mana ihe ọ drinksụ sugụ nwere shuga dị njọ n'ihi na ị na - enye nnukwu shuga na oge maka ya ngwa ngwa bụ ahụ ma enwerekwa ihe ndị ọzọ nwekwara ike ibute akpịrị ịkpọ nkụ, nke na-edugakwa na ike ọgwụgwụ. Kedu ihe ọzọ m nwere ike ịme? Ndị na-amalite izizi anaghị a don'tụ mmiri zuru oke, ndị dị mma chọrọ iko iko mmiri asatọ kwa ụbọchị na ndị ọzọ mgbe ha na-emega gị ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-emega ahụ n'ụbọchị na-ekpo ọkụ ma ị ga-emecha pee karịa ka caffeine naanị na-eme ka ịchọrọ ya pee ọzọ, mana mgbe ahụ anyị na-etinye mmiri na tii ma ọ bụ kọfị anyị na-a drinkụ ka ị ga-ahụ nnukwu pee ma pee ọtụtụ ihe pụtara. Mgbe ị gara ụlọ ịsa ahụ, ọ na-akpaghasị ụra gị, nke pụtara na ị naghị ehi ụra nke ọma na mmanya na-aba n'anya otu mmetụta dị ka caffeine n'ihi na ọ na-egbochikwa ọkwa ADH, nke pụtara na ị ga-asọpụkwu ma tụfuo mmiri site na ahụ gị, yabụ ihe nke isii na ndepụta anyị nke nwere ike ịmịpụ ume gị pụọ bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. ịda mba na ịda mba nwere njikọ na ike ọgwụgwụ anaghị m ekwu maka Instagram na Twitter ebe a.
Ana m ekwu okwu ihu na ihu ka echefula ndị enyi gị, ndị ezinụlọ gị, ma ọ bụ ndị ọhụụ ọhụrụ ọ gwụla ma ha bụ ndị ajọ mmadụ, nke mere na m kwuru ntakịrị banyere ụra n'isiokwu a, mana m ga-enweta ọtụtụ ụyọkọ edemede na ihi ụra n’ihi na enwere ọtụtụ ihe ịmara na enwere ọtụtụ nsogbu ihi ụra dị iche iche na ndị dị iche iche ma enwere ọtụtụ ndị nwere nsogbu ihi ụra ka m wee mee usoro isiokwu ma chọọ nke na-abịa. ngwa ngwa. Aga m ahụ gị ọzọ
Olee ọrịa ndị nwere ike ime ka ike gwụ mmadụ?
Akwụsịghịike gwurunwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke otu ọnọdụ ma ọ bụ mmetụta nke ọgwụ ma ọ bụ usoro ọgwụgwọ eji agwọ ya, dị ka:
Nnukwu imeju imeju.
Oge adịghị anyaike ọgwụgwụọrịa.
Ọrịa na-adịghị ala ala ma ọ bụ mbufụt.
Ọrịa akụrụ na-adịghị ala ala.
Mgbe ụfọdụ, m na-ele foto m onwe m tupu m rịa ọrịa wee gwa mama m ụbọchị ọzọ m dị afọ iri abụọ na asaa ma m ga-abụ 40 ma chee echiche, Chukwu m, kedu ka nke ahụ siri mee? nke m ma ugbu a ọ na-adị m ka ọ dị ọtụtụ n'azụ m dị m chere na nnukwu akụkụ na m ma anọghị m nso ka ọ dịkwuo mma m na-akawanye njọ m mere ọnụ ọchị ma ọ bụ mwute iji chọpụta otú m dị m na huh naanị na kalenda enwere ọtụtụ SADS, mana nke ahụ bụ mgbe niile 2009 dị ka ngalaba mmekọahụ, mgbe ahụ A-areakupuncture, nke m mere dị egwu n'oge ahụ dịka m chere na ọ bụ n'oge ahụ, amaghị m na ọ nwere ike ịka njọ na m ga-agwa nne m kpọmkwem na-ekele Chukwu ma ọ dịkarịa ala, anọghị m n'ihe mgbu ma ụdị mpụga ahụ si na igbe aka ekpe pụta n'ụbọchị. Anọgidere m na-enwe mmetụta ka njọ ma na-akawanye njọ, na-atụgharị anya ma na-eche na m nwere ọrịa mmehie ka m wee gaa dọkịta m nyere m ọgwụ nje m weere ya enweghị mmetụta ka mma m chere na m were usoro atọ na anọ nke ọgwụ nje a na aprednison tupu etiti - Nọvemba m na-emega ahụ ma na-agba ọsọ ugboro abụọ n'ụbọchị, enweghị m nkụda mmụọ n'ihe ndina ma n'ime izu atọ enwere m nsogbu iku ume enweghị ike iguzo na ịsa ahụ m na-ekwu, agbalịrị m ịga ije enweghị ike ịme m ya. Ọ dịdịghị ka m ga-anya ụgbọala Site na mgbe ahụ gaa na 12 afọ gara aga, anaghị m aka mma Mgbe m na-achọ imekwu ihe, ha na-arịwanye elu nke mgbaàmà gụnyere nhụjuanya na-enweghị ike ibili na-enweghị gafere na-eche ma ọ bụ nwee mgbaàmà ịchọrọ ịrụ ọrụ ha chọrọ ịga ụlọ akwụkwọ ha chọrọ ịga ụlọ ahịa mana ebe ọ bụ na ndị mmadụ na-achọ ime karịa ka njọ, ndị pere mpe nwere ike ịrụ ọrụ oge niile na ọrụ, dịka ọmụmaatụ, anaghị m n'ihu ọha gwa ndị mmadụ na m na-ekwu, ọ masịrị m na ị ma ezigbo ndị enyi m na ihe ọ bụla, mana enweghị m ike obibi ya oh ị nwere ihe oh gịnị mere na ị gaghị ije ije ọ bụghị ihe ị ga - ekwu dịka ee enwere m ọrịa a ma ndị mmadụ na - aga ohokay siri ike ịghọta ọrịa ahụ n’ụbọchị dị mma ma ha dị obere, ma n'otu hello ị gaghị ama na ọ maara na ị chọghị ịbịakwute ya wee kwuo nke ọma na ị ga-ahụ ya, ma ọ bụ ọtụtụ oge ọ ga-eme onye ọ bụla ihere mgbe ọ nwere dọkịta, ọ maara na ọ ga-akwụ ụgwọ ahụ echi E nwere ọtụtụ ezumike anyị agbaghara, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịhapụ ụlọ n'ihi na ọ gaghị ehi ụra ebe ahụ ụbọchị m na-agafe akwa n'ọnụ ụzọ ma na-eche ma ọ dị ndụ ma ọ bụ na ị bụghị praịm ụzọ ahụ ị na-ebe akwa, Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịpụ otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ mana ọ dịka ụbọchị ọ nwere isi ọwụwa, mgbu na-egbu mgbu nke na-ewepụ gị n'ụra ụra, ọ gaghị ehi ụra ụbọchị ole na ole ma anyị na-anwale ihe niile dr. Ose knack abịa ya nwere ihe na-arụ ọrụ maka ụfọdụ ndị mana ọ bụghị maka ha ọ bụ ọrụ anyị ile anya na nnukwu foto ma gbalịa itinye mkpokọta niile mgbe ị na-ele onye ọrịa na ndị dọkịta anyala ọtụtụ ndị dọkịta ma eleghị anya 10 dọkịta tupu n'ezie? nweta nchoputa na o nwere ike were ise na isii afọ asaa tupu mmadụ anọdụ ala n'ezie ma na-ege ntị, na-etinye iberibe ọnụ ma kwuo na ị maara ihe m chere kpatara dugara enweghị mmasị na nyocha ahụ, nke butere enweghi ozi duziri iji gosi anyị na usoro ọrịa na-aga n'ihu, ihe anyị chọrọ bụ nyocha, nyocha ka mma, na etiology ziri ezi maka ọrịa ahụ, nke ga-ebute olile anya na usoro ọgwụgwọ ọrịa na-arụpụta nke bụ sayensị sayensị nke oge a na-aga nke ọma n'ihi na anyị 'na-anwa ime ka ihe dị iche, nsogbu bụ na anyị nwere akụkụ ndị a niile, mana anyị amaghị etu ha si jikọọ, mana usoro ihe ọmụmụ bụ usoro zuru oke nke na-arụkọ ọrụ ọnụ na egwu, dịka ha jikọtara na nke ọ bụla nke ozo, kedu ka ha si aru oru dika otu ha na esi ekwukorita okwu? Ihe ọzọ kpatara Mecfs ji sie ike ịkọwapụta bụ n'ihi na anyị amaghị ihe anyị na-amaghị, na ihe na-aga n'ihu na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, ma ọ bụ ndị mmadụ na-arịa ọrịa mgbe ha butere ọrịa nje, enwere ụdị dị iche iche nke ahụ nwere ike ime nke a Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị na-atụba usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na njedebe ma ọ bụ naanị na ọ gaghị enwe ike ịlaghachi na steeti ya nke na-achịkwa nje bacteria na-ebi n'ime anyị na-edozi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, ọ bụ ka ọ nwee ike ịmata dịka akụkụ nke onwe, mana oge ụfọdụ na-ezighị ezi na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-emeghachi ihe na-enweghị isi na microbiome anyị ma ọ bụ na-akpali ya na nke a na-akpata ọnọdụ mkpali wdg.
Anyị amatabeghị otu crosstalk a si emetụta ibe anyị, enwere m olile anya maka ọdịnihu, echere m na ọ bụghị nsogbu a na-apụghị idozi eme nnyocha dị oke mma na ịnakọta usoro data zuru ezu nke a ga - emegharị na, karịa ihe niile, gbalịa na-enyere ndị ọrịa aka tifykọwapụta ihe mgbaàmà na-adakarị nwere ike iyi ihe yiri nke ahụ, mana ihe ndị na-akpata ya nwere ike ịdị iche ma ọ bụ usoro ọrụ nwere ike ịdị iche. Anyị nwere patent nchọpụta na, ọ bụrụ na anyị etinye oge na mbọ iji chọpụta ihe anyị mụtara site n'ọrịa a, ọ ga-eritekwa ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ na-adịghị ala ala. Ndị mmadụ nwere ike ịnwe ndụ, ọ na-apụnara ndị mmadụ ndụ ha ụfọdụ dị ka nwa m nwanyị ọ bụ ụdị ihe niile metụtara ndụ ya mgbe m nwere nsogbu gbasara ya echeghị m banyere ya ọ bụ naanị nwute ọ furu ụzọ n'ụzọ m na-eche na ndụ agwụla, ị bụ ọrịa cat, ọ dị ka O doro anya na, Mgbe m dị afọ iri abụọ na asaa, ahụrụ m onwe m, ma achọghị m ịbụ akụkụ nke ndụ.
Enwere ndị a taa ahụhụ n’oge ndụ ha niile, ọ na-agakwa n’ihu, naanị maka na ị hụghị ha apụtaghị na ha adịghị
Kedu mgbe ị kwesịrị ichegbu onwe gị banyere ike ọgwụgwụ?
Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, ma ọ bụ nke gịike ọgwụgwụna-akawanye njọ ma ọ bụ na-anọ ogologo oge karịa otu izu ma ọ bụ abụọ, ọ bụ ogekahụ dọkịta gị. Gịike ọgwụgwụnwere ike metụtarakaọrịa na-apụtaghị ìhè ma ọ bụ ọrịa, karịchaa ma ọ bụrụ na ihe mgbaàmà na-eso ya, dị ka ịba ọkụ ọkụ, ume iku ume, ma ọ bụ agụụ na-agụkarị.
Ka-eme ihe n'eziokwu. Mụ na gị maara na naanị ọdịiche dị n'etiti gị na ndị dị ka JK Rowling Elon Musk na Saitam abụghị ọgụgụ isi gị, ọ bụghị mkpali gị, yana ọbụnadị ụkpụrụ omume gị. Naanị ihe dị iche n’etiti gị na ha bụ na ike na-agwụ gị mgbe niile.
Ọ bụrụ na ọ bụghị maka obere obere ọdịiche ahụ, mgbe ahụ ị nwere ike ịde ederede isi ole na ole kwa ụtụtụ na akwụkwọ akụkọ America ọzọ na-esote tupu ịmalite ịmalite ime mpụ na obere ọrụ dị ka ịmụ maka ule na ọ bụghị naanị na Totinos Living Pizza ọrụ ga-adị mfe. , ma ọ dị ka ị gaghị eme ihe ndị a n'ihi na ị bụ zombie. Ọfọn, ma eleghị anya, ọ bụghị dị ka zombie nkịtị na otu ihe omume nke Space Dandy, mana myirịta na-eto eto. I nwere akpa n'okpuru anya gị.
Ọ na-adị gị ka ọ dị umengwụ ma enwere agụụ a na-enweghị ike ịkọwa maka anụ ezi, mana nke ka mkpa bụ na ị nweghị ume iji mee ihe ịchọrọ ịme kwa ụbọchị yana usoro iji mebie usoro ahụ nke ike ọgwụgwụ oge niile ma weghachite gị ume na-eme kwa ụbọchị. Tupu anyị amalite, Achọrọ m ịkọwa na anaghị m ekwu maka ọnọdụ dịka Ọrịa na-adịghị Ala ala na SEID, nke na-emetụta ọtụtụ nde mmadụ ebe a na US naanị ma sie ike ịgwọ ma chọpụta, ihe m na-ekwu bụ ọtụtụ ike gwụrụ na-enwekarị ike ọgwụgwụ, nke na-emetụta ọtụtụ ndị mmadụ ọzọ nke enwere ike igbochi ya kpamkpam site n'ịgbaso omume ahụike, ọkachasị maka ezigbo ụra. Ka ọ dị ugbu a, ị ga-ahụrịrị ndụmọdụ nke National Sleep Foundation na-atụ aro awa ole ị ga-ehi ụra kwa abalị dabere na afọ gị, mana ọbụlagodi iji nọmba ndị a tọọ elekere mkpu gị, ị ka nwere ike iteta n'ụtụtụ ma nwee nke ahụ Ọ na-adị gị ka ụgbọ ala kụrụ gị, ọ bụrụ na ọ bụ ya kpatara na ọ ga-abụ n’ihi na ị naghị asọpụrụ oge ụra gị.
Hụ, n'abalị, ụra na-apụta n'ọtụtụ ọkwa dị iche iche, nke ọ bụla d. kwekọrọ na ọkwa ụbụrụ dị iche iche yana nke a maara dị ka ụra ụra. Ugbu a, m ga-ejikọta na isi mmalite ndị dị n'okpuru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye n'ime omimi, mana ihe ị kwesịrị ịma ugbu a bụ na ọ bụrụ na ị teta n'ụra na-ezighi ezi nke oge ụra gị, ị ga-enwe oke egwu na nke ahụ bụ ihe ize ndụ Ha na-anwụ mgbe ị na-eji elekere mkpu.
Maka ọtụtụ akụkọ ntolite mmadụ, anyị enweghị elekere mkpuchi ma ọ bụ ọkụ eletrik. Sleepdị ụra anyị dabara nke ọma na ụbọchị na abalị, okirikiri nke ahụ na-achịkwa ha. Onye biri tupu e mepụta elekere mkpu ga-eteta n'ụra mgbe ọ gụchara ụra, ọ gwụla ma ihe dị ka oke ọkpa ma ọ bụ mbuso agha nke Mongol na-enye ha nsogbu.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị ụjọ n'etiti etiti ụra gị, ị ga-eteta na ọnọdụ zombie. Dị ka Pierce J Howard si tinye ya n'akwụkwọ ya bụ The Brain's Guide, onye na-ehi ụra nanị ugboro anọ ma ọ bụ awa isii ga-enwe ahụ iru ala karịa onye rahụrụ ụra awa asatọ ruo iri mana anaghị ekwe ka ọ mezue otu okirikiri n'ihi na a kpọtere ya tupu akpọchiri. Ugbu a, usoro nke ụra a ọ bụla na-adịru nkezi nke 90 nkeji, n'oge gara aga, akwadoro m saịtị a na-akpọ sleepytime.me nke na-eji nọmba a enyere gị aka ịmata mgbe ị ga-eteta dabere na oge ụra gị.
Mana otu ihe m mụtara n'oge na-adịbeghị anya bụ na ọnụọgụ nkeji 90 a bụ naanị nkezi ma ọ nwere ike ịdị iche na nkeji 30 n'ụzọ ọ bụla. Kama ịtọ oti mkpu gị dabere na ọnụọgụ nkeji 90 ahụ, gbalịa ịchọpụta mgbe ị ga-eteta n'ụra kama. Nke a nwere ike iwe obere oge iji mụta, mana ozugbo ị matara ihe ọ bụ, ịnwere ike iji elekere oti mkpu gị dị ka usoro ndabere ma bụrụ nke ọma na ị ga-eteta mgbe ụra ụra ikpeazụ gị zuru ezu tupu ya eruo nke okike, zuru ike ebe a gbaa mbọ hụ na i biliri n’oge ma ọ bụrụ na ihe adịghị.
Nke ahụ pụtakwara, n'ezie, na ị ga-abanye n'àgwà nke ịlakpu ụra n'oge iji teta tupu mkpu ahụ amalite, ma ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu ịme nke a dịka m mere, enwere m edemede zuru ezu na m na-ezo aka na nkọwa njikọ dị n'okpuru ebe a, mana omume kachasị mkpa ị ga-ewu ugbu a bụ iwu ememe izu ike. Ihu ọma, ịchọrọ ịhapụ ihe ọ bụla ị ga - abanye n'ime tupu ị lakpuo ụra. Maka m, nke a pụtara ịgbanyụ kọmputa m ihe dịka elekere itoolu nke abalị. Abali ọ bụla ma ọ bụ ọzọ m ga-ekwenye onwe m, enwere m ike ịza ozi ịntanetị ole na ole, mgbe ahụ, a ga-enwerịrị m ịmịnye n'ime nyocha pịa iji hụ ma m nwetara ngwaahịa iji zụọ Freddy Krueger ka ọ bụrụ onye na-azụ ahịa. solidra oge ihi ụra nke ukwuu, ị ka nwere ike ị na-ata ahụhụ site na nsogbu dị iche iche dị n'etiti ụmụ akwụkwọ kọleji na metụtara enweghị anwụ na mmega ahụ na nke abụọ ebe a, mana nke mbụ Achọrọ m ịmara na ọ bụrụ na ike gwụrụ m n'oge ụbọchị, ịmalite ụbụrụ a maka ije ije nkeji 20 na-arụ ọrụ mgbe niile.
Ọ bụ ụzọ otu ụzọ nwere ike isi mee ka m si na steeti a. N'ihi ya, m kwadoro ịkwado ya. N'ikwu eziokwu, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya n'ihi na e mere ahụ anyị ịmegharị.
Ndị mmadụ agaala njem ọtụtụ kilomita iji nweta anụ oriri ha, ọbụlagodi na anyị tụgharịrị gaa ọrụ ugbo maka mmepụta nri, nke pụtara na ọtụtụ n'ime ha apụọla otu ụbọchị na-arụsi ọrụ ike ma na-eyikwa uwe mara mma. Ma ugbu a, ọtụtụ n’ime anyị na-anọkarị otu ebe. Anyị na-etinye oge dị ukwuu na oche na oge niile anyị na-abanye n'ime ngebichi na akwụkwọ na-edebe anyị n'ime ụlọ ma pụọ ​​na anyanwụ.
Na nke ahụ nwere ike ịga ogologo oge na ịkọwa ihe kpatara inwe ike gwụrụ adịghị ka njikọ njikọ dị ka ọ dị maka osisi anaghị achọ ihe ọ bụla mana ìhè anyanwụ na Brawndo agaghị emehie. Anyanwụ na-arụ nnukwu ọrụ iji nọgide na-enwe ike ike gị, gụnyere mmepụta nke melatonin, homonụ nke na-enyere gị aka ịrahụ ụra ma na-ekere òkè na ịchekwa ụda circadian gị, nke na-enyere gị aka ịnọrọ na usoro nke ehihie na abalị gị. Ma ìhè anyanwụ bụ kwa ihe na-enye vitamin D ahụ gị, nke na-abụghị naanị na ọ na-arụ ọrụ na ịchekwa ọkpụkpụ gị, na-eme ka usoro ahụ gị na akpa ume gị rụọ ọrụ, kamakwa ọ na-arụ nnukwu ọrụ na igbochi ike ọgwụgwụ.
Otu nnyocha e mere n’afọ 2014 gosiri njikọta dị n’etiti ụkọ vitamin D na ike ọgwụgwụ, yana nnukwu mmụba na mgbaàmà ndị a nke ike ọgwụgwụ ozugbo ndị ọrịa nọ n’ọmụmụ ihe weghachitere ọkwa vitamin D ha ka ọ dị mma. Ka ọ dị ugbu a ị nwere ike na-eche na ị nwere ike iri nri ka mma iji nweta vitamin D, mana ọ bụghị. Ọ bụ ezie na imeziwanye ihe oriri gị ga - enyere aka ike gị, ọ ga - eme ka ogo gị dịkwuo mma n'ụzọ ndị ọzọ, dị ka Mark Sisson n'akwụkwọ ya bụ Primal. na-egosipụta atụmatụ nri nri iji nweta vitamin adịchaghị mkpa ma e jiri ya tụnyere ikpughe anyanwụ.
Iji tinye ụfọdụ ọnụọgụ siri ike mgbe nke ahụ gasịrị, ọkọlọtọ A. nri ndị Merican na-enye gị ihe dịka 300 IU, ma ọ bụ nke vitamin D kwa ụwa, mana ndị ọkachamara na-atụ aro ị nweta 4,000. Nke a bụ nnukwu ọdịiche, mana ọ dabara nke ọma, ịga ije naanị n'èzí maka nkeji 20 n'oge ọnwa kachasị elu nke ekpughere anyanwụ nwere ike ịme ihe dị iche. Lee bụ na ikpughe anyanwụ naanị n'oge ọnwa oyi anaghị ezukarị ma ọ bụrụ na ịnọghị nso ekwueto.
Ọ naghị esiri ya ike, ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ji enwe ịda mba n’oge. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe maka gị, ị kwesịrị ị na-ele anya n'ime a vitamin D emeju n'oge ndị a ọnwa. Mana n'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị mma ịnweta opekata mpe anwụ kwa ụbọchị, ọbụlagodi na ọ bụ naanị obere ije.
Nke ahụ na-ewetara anyị isiokwu nke mmega ahụ, a ga m agwa gị na naanị ụzọ ịghara inwe ike gwụrụ oge niile bụ ịnweta mgbatị siri ike kwa ụbọchị, mana ọ dabara na nke ahụ abụghị ikpe ma ọ bụ ije ije 20 nkeji na Outdoors , dị ka anyị kwuru, pụrụ ọbụna ịdị irè karịa mmega ahụ siri ike karị n'iwepụ ihe mgbaàmà ndị a nke ike ọgwụgwụ na ụbụrụ ụfụ. Na 2008, ndị na-eme nchọpụta na Mahadum Georgia mere ọmụmụ ihe wee chọpụta na ụmụ akwụkwọ mere mgbatị ahụ naanị nkeji iri atọ ugboro atọ n'izu chọtara ezigbo mmụba na ogo ike ha kwa ụbọchị na ike ọgwụgwụ ha. Ọzọkwa, mmelite ha na mpaghara ndị a dị mma karịa otu n'ime ọmụmụ ihe ahụ nke gosipụtara ike karịa.
Ya mere, isi okwu bụ, ọ bụrụ na ike gwụrụ gị oge niile, na-emega ahụ kwa ụbọchị. Worme mgbatị ahụ dị arọ ma ọ bụ na-agba ọsọ 10 kilomita bụ ihe ọchị ụmụaka, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ka ga-esi na ije ọsọ ọsọ na ije nke ị gaghị ewepụ kọfị gị Agaghị m ama ndị caffeine ikpe ebe a. ọ bụrụ na ị na-eji ya oge ọ bụla na mgbe ahụ ọ nwere ike ịbụ ngwa bara uru iji gbochie ike ọgwụgwụ mgbe anyị kwesịrị ịkwụsịchaa nnukwu kọfị Project, mana dị ka onye na-agbake caffeine riri ahụ nwere ike ịgwa gị, ọ dị oke mfe ị cafụ caffeine na mgbe niile ndabere, ma ọ bụ ebe nsogbu ahụ na-amalite. Maka ndị na-ebido ebido, ọ bụrụ na ị na-a somethingụ ihe ọ cafụfeụ caffeinated oge na-adịghị anya, ọ nwere ike imebi ụra gị.
Ikwu okwu dika elekere 9 nke abali. iko joe.
Ana m ekwu ihe dị ka awa isii tupu ị lakpuo ụra, dị ka otu nnyocha si kwuo. Yabụ ọ bụrụ na ị na-eri kọfị n'ehihie, ị nwere ike igbochi ụra gị, nke ga-eme ka ị dabere na ya n'echi ya. Ọzọkwa, dị ka ọgwụ ọ bụla ọzọ, ọ bụrụ na ị na-eji ya eme ihe mgbe nile, ahụ gị ga-amalite ịzụlite caffeine.
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ahụ gị na ụbụrụ gị abụọ nwere ọtụtụ ndị na-anabata ihe maka ngwakọta a na-akpọ adenosine, ngwakọta ahụ na-agwa ahụ gị na ike gwụrụ ya na ọ dị njikere ihi ụra. Caffeine na-arụ ọrụ site na i mimomi adenosine ọ na-egbochi ndị nabatara ya ma gbochie adenosine ịbanye, na-eme ka ị nwee ume nwa oge karịa ike ọgwụgwụ. Onye ọdee akwụkwọ bụ Stephen Braun nwere mmasị itinye osisi nkụ n'okpuru otu n'ime ihe nkwalite breeki ụbụrụ nke mbụ na usoro a, n'agbanyeghị na adenosine niile a na-ewu ewu na-agbaba ma na-ebute caffeine niile a maara nke ọma. Ahụ ga-edozi nke ọma iji mekwuo ndị nabatara adenosine, nke ahụ pụtara na, ka oge na-aga, ị ga-achọkwu caffeine iji rụọ otu ọrụ ahụ wee nwee mmetụta otu ite kọfị anọ kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ n ’ịnọ n’oge ugbu a, ikekwe ị bụ enyi m site na kọleji ma ọ bụ n’ụzọ ị ga-esi gaa kọleji, dịka m mere n’ọtụtụ ebe na ndụ m. Usoro ịwepụ onwe gị na caffeine nwere ike isi ike. Thedị ihi ụra na mmega ahụ anyị kwuru maka ya na mbụ n'isiokwu a nwere ike inye aka, mana ị nwekwara ike iji ndụmọdụ dị n'okpuru ebe a iji mee ka usoro ahụ dị mfe.
Ọ bụrụ na ị nwere kọfị ma ọ bụ ihe ọ energyụ energyụ ike mbụ, gbalịa gbanwee tii. Ọ bụ ezie na ọtụtụ teas nwere ụfọdụ caffeine, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-adịkarị ntakịrị karịa ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ. Maka ndị gị na-eche tii na-atọ ụtọ dịka mmiri mmiri ozuzo na-adịghị ọcha nke si na gutter, enwere m mkpụrụ okwu atọ maka gị, tii tii.
Ọbụghị naanị na ọ bụ ekpomeekpo karịa ha nwere nke dị elu karịa ndị akpa, mana enwere ọtụtụ narị ụtọ dị iche iche ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-a coffeeụ ihe ọ coffeeụ coffeeụ kọfị ị nwere ike ịmalite site na ihe dịka Earl Gray ma ọ bụ nri ụtụtụ Irish, nke na-adịchaghị ka kọfị mana agwakọtara ya na mmiri ara ehi na-eme ezigbo mma nsuso usoro nsuso ngwa dị ka agwa, ma mee ụbọchị 30 ihe ịma aka gbutuo caffeine. Nke a ga-enye gị obere mmezi mkpali n'ihi na ị nwere ugbu a, ihe gbara ọkpụrụkpụ na-arụ ọrụ kwupụta na ị na-Ndekọ ọganihu gị kwa ụbọchị.
N'ikpeazụ, drinkụọ mmiri ọzọ ma ị ga-ewulite omume ahụ site n'iji karama mmiri buru ebe ọ bụla ị na-aga. Nke a bụ isi mmiri ga-abụ ma ọ bụ dochie anya ihe ọ drinksụ cafụ caffeinated niile ị na-a drinkụkarị, ọ bụ ezie na ọ naghị enye gị mkpọtụ, ọ na-enyere aka na mmetụta ndị ahụ nke ike ọgwụgwụ na ụbụrụ ụfụ. Ọbụna akpịrị ịkpọ nkụ pụrụ ime ka ike gwụ gị.
Nke ahụ bụ n'ihi na akụkụ niile nke ahụ gị, gụnyere ụbụrụ gị, chọrọ ezigbo mmiri iji rụọ ọrụ nke ọma, ebe ndụmọdụ ochie ị toụ iko asatọ kwa ụbọchị anaghị ejide sayensị, ọtụtụ mmadụ anaghị enweta ya ìgwè mmadụ ma mgbe m bụ otu n'ime ha. Anaghị m eweta karama mmiri ahụ mgbe m na-apụ apụ, ọ na-esiri m ike ị drinkụ mmiri site na ihe ọ bụla n'ụbọchị, Ọ D, MMA, anyị kpuchiri ọtụtụ ihe n'isiokwu a. Ya mere, ka anyị mee nchịkọta ngwa ngwa.
Ọ bụrụ n ’achọghị ike gwụ gị n’oge ahụ, ị ​​kwesịrị ịdị ike, buru ụzọ hie ezigbo ụra, ma kwanyere usoro ihi ụra nke ahụ ùgwù site na iji igwe elekere adịghị. Gbalịa kulie ndammana ma jiri naanị mkpu gị dị ka ndabere. Nke abụọ, pụọ n'èzí.
Were obere ihu anyanwụ kwa ụbọchị, tụlekwa ị takingụ vitamin D nke ọma n'oge ọnwa oyi, ọbụlagodi na ọ bụ ihe dị ala, dịka ije ije ọsọ ọsọ ma ọ bụ jumbo jets na ezé gị. Nke anọ, jiri nwayọ na-eji ịfeụ caffeine eme ihe. Jiri ya dị ka ngwá ọrụ.
Adịla ka enyi m na mahadum wee andụọ ite kọfị atọ ma ọ bụ anọ kwa ụbọchị wee wuo ahụ riri ahụ. Na onu ogugu ise, gbaa mbọ hu n’a areụ mmiri ọ enoughụ enoughụ. Ugbu a ị nwere ike na-eche na ọ nweghị nke omume a dị ka nke kacha acha ma ọ bụ nghọta, mana m ga-ajụ gị ole n'ime ha ka ị debere? N'ihi na ọ na-agbadata izere ndụ nke ike ọgwụgwụ mgbe niile ruo n'ókè nke ịnakwere àgwà ahụike.
Ha nwere ike iyi ihe doro anya, mana oge ụfọdụ anyị chọrọ ihe ncheta dị mfe. Anyị ga-akwụsị ma mee nkwa ma ọ bụ tinye usoro iji were ya kpọrọ ihe, ọkachasị mgbe anyị nwere ihe dịka ebumnuche na ụlọ akwụkwọ na mmekọrịta na egwuregwu egwuregwu nke na-agba anyị ntị ugbu a ekwetaghị m ọtụtụ ihe gbasara nwa okorobịa ahụ ụbọchị ndị a na-ekwu, mana Elliott Hulse kwuru okwu dị mma mgbe ọ sịrị na akụkụ kachasị mkpa nke egwuregwu ahụ bụ akara gị. Ya mere, mee ka ahụike gị bụrụ ihe kacha mkpa na nloghachi, a ga-eji ike na-adịghị ahụkebe na-elekwasị gị anya nke ị ga-eji mee ihe ndị a niile.
I nwedịrị ike ịchọta onwe gị n'ike iji rụọ ọrụ ndị ị na-agaghị echebara echiche tupu - kama ịme ihe omume ụlọ akwụkwọ gị wee lelee Netflix ma ọ bụ igwu egwu egwuregwu, ị nwere ike ịnwe ume ị ga - eji kụzie otu esi ewu isiokwu egwuregwu ma ọ bụ na-amụta foto odida obodo. Ma kama ịziga pizza ma ọ bụ mee ihe dị mfe, ị nwere ike ịchọrọ isi nri ihe chọrọ ezigbo nka. Mgbe ị ruru ebe a, ikekwe ị ga-achọ ime ka usoro mmụta gị dị ngwa karịa ka o kwere mee na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ị nwere ike ime na Skillshare.
N'ime ihe karịrị 17,000 ọmụmụ na ọtụtụ isiokwu dị iche iche, ọbá akwụkwọ Skillshare nwere ike inyere gị aka iwulite ntụkwasị obi ngwa ngwa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara ọ bụla ị ga-eche, foto, mmepụta egwu, imepụta egwuregwu, na ee ọbụna isi nri. N’oge na-adịbeghị anya, m weere klas ha mara mma nke kụziiri m ụfọdụ usoro m na-agaraghị eche n’onwe m ma ha nyere m aka iwepụ obere oge ịkwadebe akwụkwọ nri mgbe m nọ na kichin nke pụtara na m na-eme ọtụtụ ihe na akwụkwọ nri esi nri ore mgbe mgbe , na kama ịkọzịa ozi dị ka okwu ihu ọha, nkuzi nka na-enye ọrụ aka. Ọ ga-anwale ihe ị mụtara wee maa gị aka ka ị meziwanye nka gị ọsịsọ, yabụ mgbe ị dị njikere itinye ike ọhụrụ niile ahụ n'ọrụ n'ịmụta nkà ọhụrụ, nye Skillshare ịnwale.
Ndị 500 mbụ na-edebanye aha na iji njikọ dị n'okpuru ga-enweta ikpe ọnwa abụọ n'efu wee nweta ndenye aha ego maka naanị $ 10 kwa ọnwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-amụ ihe. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ na-mfe mfe ịkagbu. Daalụ maka Skillshare maka ịkwado edemede a ma nyere aka kwado ọwa a.
Kpọrọ, M hụrụ n'anya na-arụ ọrụ na Skillshare. Ha bu oke mmadu n’ebe ahu. Na ụmụ okorobịa, dị ka mgbe niile, ekele maka ikiri.
Ọ bụrụ n ’ị masịrị isiokwu a ma hụ na ọ bara uru n’oge ahụ kedu etu ụzọ aghụghọ si enyere ọwa a aka, ma ọ bụrụ na enwere ihe m na-ekwutaghị ebe a na ị hụrụ na ọ bara uru na ndụ gị, hapụ na nke ọ bụla, hapụ okwu n’okpuru ndị ọzọ. nwere ike irite uru na ya. Na mgbe anyị na-ekwu maka ihe ndị a hapụrụ, ama m na anyị emetụbeghị elu ma a bịa n'ihe gbasara nri, ma ọ bụ na anyị ekwu maka etu esi arahụ ụra. Yabụ, aga m eme edemede banyere isiokwu ndị a n'ọdịniihu ma chọọ ka agwa gị gbasara ya na ihe ọ bụla m biputere, ị nwere ike ịdenye aha na ọwa a n'okpuru ebe a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnata ọkwa.
Ọzọkwa, ọ bụrụ n'ịchọrọ inweta akwụkwọ m n'efu na akararịrị ka mma, ị nwere ike pịa aka nri ebe ahụ inweta ya. I nwekwara ike pịa ebe ahụ iji lelee ọhụụ Podcast anyị kachasị ọhụrụ. N'ikpeazụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ edemede ọzọ na ọwa ahụ, pịa ebe ahụ.
YouTube họrọ otu ma ọ nwere ike ịnụ ụtọ ya. Ka osila dị, ekele maka ikiri na a ga m ahụ gị n’izu ọzọ.
Kedu Vitamin ị na-enweghị ma ọ bụrụ na ike gwụrụ gị oge niile?
abụọ.Vitaminerughi. Ịbụike gwụrụ oge niile nwere ikebụrụkwa ihe ịrịba ama nkevitaminerughi. Nke a nwere ike ịgụnye obere ọkwa nkevitaminD,vitaminB-12, ígwè, magnesium, ma ọ bụ potassium.Ọnwa Isii 26. Dec 2019
Gịnị mere ike ga-eji na-agwụ m mgbe niile n’agbanyeghị ole m ga-ehi ụra?
Otu Ihe Mere I Ji MeeMgbe niileNweeIhi ụra: Hypersomnia
Y’oburu n’ike adi, ma odina-ehi ụra mgbe niile n'agbanyeghị ụra ole ọ bụlaị ga-enweta, ịnwere ike ịnwe Hypersomnia. Na nkenke, hypersomnia bụ ọnọdụ na-adịghị ala ala nke na-eme gịike gwụrụ n’agbanyeghị ụra ole ọ bụlaị nwetara.19.10.2020
Kedu vitamin kachasị mma maka ike ọgwụgwụ?
Yana ndi ozo Bvitamin,vitaminB12 na - enyere aka ịgbanwe nri ị riri n’ime ike sel gị nwere ike iji rụọ ọrụ. Ọ na - emekwa ka irighiri akwara na ahụ gị dị mma ma na - enyere aka igbochi ụdị anaemia nke nwere ike ime ka ike gwụ gịike gwụrụ(22).28.05.2018
Kedu ihe ọghọm adrenal na-adị?
Mgbaàmà nke ụdị abụọ ahụ gụnyere ike ọgwụgwụ na-adịghị ala ala, enweghị agụụ, adịghị ike akwara, oke ibu, na mgbu afọ. Might nwekwara ike inwe ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, ọbara mgbali elu, afọ ọsịsa, ịda mbà n'obi, ma ọ bụ na-agba ọchịchịrị nke anụ ahụ.Bọchị 7 2021
Kedu ihe bụ nsogbu ọgbụgba push?
Machị 1, 2018. TheKwaanaokukuakụkụ nke ike ọgwụgwụọrịa(CFS) mara ndị nwere ọnọdụ ahụ nke ọma. Gbalịsie ike nke anụ ahụ na / ma ọ bụ n'uche ma “okuku”- mgbaàmà gị ndị na-emekarị na-acha ọkụ, mgbe ụfọdụ ndị ọhụrụ na ndị na-akpali akpali na-apụta ma ị na-emerụ ahụ.Mar 1 2018
Ịbụike gwụrụ oge niile nwere ikebụrụkwa ihe ịrịba ama nkevitaminerughi. Nke a nwere ike ịgụnye obere ọkwa nkevitaminD,vitaminB-12, ígwè, magnesium, ma ọ bụ potassium. Nyocha ọbaranwere ikenyere aka choputa erughi. Dọkịta gị nwere ike ịkwado ịnwe ihe mgbakwunye.Ọnwa Isii 26. Dec 2019
Kedu ihe kpatara ike gwụrụ m mgbe m hiri ụra 12?
Njirimara nke hypersomnia
N'okwu ndị dị oke njọ, onye nwere ọrịa hypersomnia nwere ikehie ụradara n'abalị n'ihi na12 awama ọ bụ karịa, manakana-eche na ọ dị mkpa ịra ụra n'ehihie.Ihi ụraihi ụra obere ihe nwere ike ọ gaghị enyere gị aka, ụra nwekwara ike ịna-echu gị ụra.
Gịnị ka ọ pụtara mgbe ike gwụrụ gị mgbe niile?
Ike ọgwụgwụ bụ ike ọgwụgwụ na-adịgide adịgide ma na-egbochi. Na ike gwụrụ, ike agwụbeghị gị, ị na-adịgide, ma na-alaghachi azụ. O yiri otu ọ na-adị gị mgbe ị na-arịa flu ma ọ bụ na ị na-atụghị ụra nke ọma.
Gịnị na-akpata ike ọgwụgwụ Dị ka iclọ Ọgwụ Mayo?
Site na ndị ọrụ ụlọ ọgwụ Mayo. Ọtụtụ mgbe ike gwụrụ nwere ike ịdabere na otu omume ma ọ bụ karịa nke omume gị, ọkachasị enweghị mmega ahụ. Ọ na-emetụtakwa ịda mbà n'obi. N'oge ụfọdụ, ike ọgwụgwụ bụ ihe mgbaàmà nke ọnọdụ ndị ọzọ na-akpata ọgwụgwọ chọrọ ọgwụgwọ.
Kedu mgbe ị ga-ahụ dọkịta maka ike ọgwụgwụ na ike ọgwụgwụ?
Ihe ka ọtụtụ n’ime anyị maara otú ike ọgwụgwụ si adị, karịsịa mgbe anyị nwere oyi, azụ̀zụ̀, ma ọ bụ ọrịa nje virus ndị ọzọ. Ma mgbe ike na-agwụ gị mgbe niile na ike ọgwụgwụ, ọ nwere ike ịbụ oge ịgakwuru dọkịta gị.